Siyaadda xisbiga S ee macaashka shirkadaha oo meel la isla dhgey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siyaadda xisbiga S ee macaashka shirkadaha oo meel la isla dhgey
La daabacay lördag 6 april 2013 kl 11.52
Go'aanka meesha dhexe ku gaareen xubnuhu shir-weynaha xisbiga S uga socda magaalada Götebrg ee siyaasadda la xiriirta macaashka shirkadaha ku hoowl-gala hoowlaha adeegga bulshada iyo in qaasatan dhanka wax-baashada masuuliyadda ugu weyn ey leeyihiin maamullada degmooyinku iney mamnuucaan ama ogolaadaan furashada iskuulaad mulki loo leeyahey.
Hase yeeshee dhanka kale go'aankan heshiiska lagu gaarey laga saaray ereygii ahaa in degmooyinka loo ogolaado codka "vito-da" ee diidmada aan laga hor iman karin karin.
Ibraahim Baylan, af-hayeenka arrimmaha iskuulka ee xisbiga S, ayaa sheegay in go'aankaasi aanu macnihiisu ahayn inaan halkiisii laga sii wadi kain wada-hadalkii xisbigu la lahaa guddi-dawladeedka iskuullada mulkida loo leeyahey. Mana jiaan wax aan wax laga bedel karin, sida uu sheegay Baylan.
Shir-weynha xisbiga u socda oo galay maalintiisii afaraad ayaa lagu dooran doonaa hoggaanka sare ee xisbigu yeelen doono, halka berito oo axad ahna uu soo gabagaboobi doono shir-weynaha xisbiga sooshiyaal-dimoqoraadiga ee sannadka 2013.